Opera for Developers Manampy endri-javatra Network Virtual Private (VPN) | Avy amin'ny mac aho
Opera ho an'ny mpamorona dia manampy endri-javatra tambajotra tsy miankina virtoaly (VPN)
Toa rehefa miresaka momba ny mpizahatany ho an'ny OS X isika dia tsy misy afa-tsy safidy roa na telo mendrika hivezivezy, ny Apple browser Safari, Google Chrome ary Firefox. Raha ny lojika dia misy maro kokoa ary maro aminareo no mahalala azy ireo, manao ahoana ny raharaha amin'ny Opera.
Opera dia mpitety tranonkala izay miasa sy mivoatra an-taonany maro ary ankehitriny ao amin'ny iray amin'ireo fiasa vaovao izay ampidirina ao amin'ireo kinova izay navoaka imbetsaka isan-kerinandro, manolotra anay mialoha ny fiasa momba ny asa sy andrana azo aseho ny mpamorona Opera. amin'ny vokatra ho avy. Amin'ity tranga ity, momba ny fanasongadinana fiasa iray nampiana amin'ity kinova farany ity izay tena mahaliana antsika mpampiasa sasany, fampisehoana tambajotra tsy miankina virtoaly (VPN).
Izany no Video avy amin'ny Opera:
Ny manome ohatra tsotra amin'ny fampiasana ny tambajotra tsy miankina dia amin'ny tambajotra Wi-Fi misokatra. Azontsika atao ihany koa ny milaza fa raha mandeha amin'ny faritra amin'izao tontolo izao isika izay misy fidirana amin'ny serivisy tambajotra sasany toa an'i Google, YouTube na izay voafetra, miaraka amin'ny VPN afaka mivezivezy tsy misy olana isika satria "manafina" antsika ny toerana izorantsika sambo. Fa ny fampiasana VPN dia manana fampiasana mahaliana maro hafa.
Amin'ity tranga ity, ny Opera dia tsy mitaky programa na fampiharana ivelany hivezivezy satria ampidirin'i Opera ho safidy izany. Andininy mahaliana iray hafa ihany koa fa maimaim-poana koa izy io ary tsy mitaky fisoratana anarana alohan'ny hampiasana azy amin'ny Mac. Raha te hampandeha ny serivisy dia ilaina fotsiny ny mametraka Opera, tsindrio ny tsindry eo amin'ny bira fisakafoanana, safidio ny "Preferences" ary tsindrio ny safidin'ny switch VPN.
Afaka mahazo ianao fampahalalana bebe kokoa momba ny Opera na manomboka mampiasa navigateur aza, miditra amin'ny tranokalanao manokana ity rohy ity ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Opera ho an'ny mpamorona dia manampy endri-javatra tambajotra tsy miankina virtoaly (VPN)
testfjavierpe dia hoy izy:
Safari sy Chrome amin'ny OSx ??? Ary ahoana ny amin'ny Firefox, adinonao ve izany?
Mamaly an'i testfjavierpe
Tsy nanadino aho fa ny tena be mpampiasa matetika dia ireo roa ireo add ampiako ao amin'ilay lahatsoratra, misaotra tamin'ny fandraisana anjara.
Hevitra Mac taloha miaraka amin'ny Teknolojia CURVED / labs ankehitriny
Apple manapaka ny fifandraisana amin'i BMW sy Daimler hiara-miasa amin'ny tetikasa Titan